Yenziwa njani ibhodi yokusika uqalo?
Ziziphi iintlobo zeebhodi zokusika i-bamboo 1. Ibhodi yokusika i-bamboo yasekuqaleni Ibhodi yokusika i-bamboo eqhelekileyo ngumgca we-bamboo owenziwe ngokuqhekeza i-bamboo kwaye uyithumele xa isetyenziswe kuyo. Iphantsi kokhuseleko lwesizwe kwaye inokusetyenziswa ngokuzithemba. 2. Yonke ibhodi yokusika i-bamboo Kwi-en...
Indlela yokukhetha iimveliso ze-bamboo ezilungileyo? Makhe sijonge inkqubo yemveliso
Ukuveliswa kwemisebenzi yezandla zokhuni kubaluleke kakhulu malunga nokukhethwa kwezinto ze-bamboo. Ngokuqhelekileyo, ukhetha ukungena ezintabeni emva kobusika, ngaphambi kwentwasahlobo, xa imozulu icacile, lungiselela iimbiza ezinkulu zentsimbi ezimbini, i-caustic soda, imela ye-bamboo, i-ax, i-curium kunye nezinye izixhobo. Kuyi b...
Ngenxa yokuveliswa okuphezulu kunye nokukhuselwa kokusingqongileyo kwe-bamboo, iimveliso ezininzi ze-bamboo zineepateni zendalo ezizodwa, zilula kwaye zihle, kwaye zizityebi kwinkcubeko. Umzekelo, ifenitshala ye-bamboo nayo ineempawu zokufunxa ukufuma kunye nokufunxa ubushushu, ishushu ebusika kwaye ipholile...